Daal oo ka mid ah fursadaha isla eCard ahayn jir? Websites badan oo Christmas eCard haboon, daynin aad si toos ah u diraan kaararka Christmas sida ugu fudud buuxinta foomka. Dhibaatada waxa ay tahay in kaararka aad ka hesho websites kuwaas oo inta badan waa versions cookie-magaabay ee wax la mid ah. Haddii aad rabto in aad kala dooran Customization ka badan, ama aad daasho oo kaliya oo ka mid ah kaarka Christmas jir ah isla, qodobkan ku tusi doona sida si ay u abuuraan shakhsiga iyo dhaceen kaararka Salaan Christmas isticmaalaya sawiro aad iyo music u gaar ah. Wixii kuwa doonaya in ay abuuraan kaararka salaan la videos, fadlan riix halkan . Hubi kaarka dhaceen Salaan iga dhigay by hore.
Wondershare Flash Gallery Factory waa fursad weyn u samaynta kaararka One oo salaan Christmas. Isticmaalka badan ee la dhisay Christmas arrimo kaarka la socda barnaamijka, waa wax sahlan oo dareen leh si aad ugu qorshayso aad kaararka caado u gaar ah. Waxa aad u baahan doontaa in si fudud waa in ay dajiyaan sawiro aad u jecel yahay oo music, iyo Flash Gallery Factory samayn doonaa inta kale ee aad u.
Marka hore, Photos iyo Import Card Music
Ka dib marka aad abuurtaan Flash Gallery Factory, waxaad ku dari kartaa sawiro aad kaarka. Waxaad soo dhoofsadaan kartaa sawirro badan intii aad rabto. Laakiin tan iyo markii aad qaadashada kaarka Christmas ah, waxaan soo jeedinaynaa in la isticmaalayo 5-8 sawiro. Sidaas dhirtuba ay si aad sawir gal goobta, dooro sawiro aad rabto, iyo riix " Add Photo "button. Ku darista song Christmas ka ahaan doono ka sii fiican. Sida in ku daray sawiro, in lagu daro music riix badhanka Music dar.
Marka labaad, Dooro Template Card ah
Hadda bedesho tab Template ah in la doorto template card , kaas oo isla markiiba wuxuu beddeli doonaa sawiro iyo music galay kaarka Christmas dhaceen. Ogsoonow in aad u baahan tahay waxaa laga yaabaa in la xiriira internet ah inaad kala soo baxdo ka badan Christmas card marto. Kaarka arrimo Christmas waxaa laga heli karaa category theme.
Mar saddexaad, In kor loo qaado Kaarkaaga Christmas
Waxaad kor loogu qaado kartaa kaarka Christmas dhaceen in Saamaynta oo Dusha tab. Tusaale ahaan, aadan ku qanacsanayn saameynta ay is bedel oo ka mid sawir si ay sawir soo socda, si ay u tagaan saamayn tab iyo jiididda ku ah saamayn design cusub oo lagu beddelo mid ka mid ah asalka ah. Sidoo kale, haddii aad rabto in lagu daro qaar ka mid ah koob ama snowflake dhacaya card kirismaska, tag in ay qurxiyaan tab. Dhawaaqyada ayaa sidoo kale lagu dari karaa si aamusnaan ah aad Christmas xiiso leh kaadhka.
Mar afraadka, dhaceen Christmas Cards qaabab
Waa wakhti ay ku abuuraan kaararka Christmas aamusnaan ah. Kaararka Your Christmas badbaadi karaa qaabab kala duwan. Dooro mid ka mid ah, si loo waafajiyo baahidaada.
Email : Kolkiiba diri kaararka Christmas final sidii lifaaqa (s) via Outlook Express . Ku lifaaqan waxaa ka mid ah Jabbuuti iyo / ama HTML ku xiran goobaha aad. Waxay la furi karo iyadoo sahamisa web sida Internet Explorer, ama ciyaaryahan Jabbuuti. Si loo hubiyo in aad kaarka gaari karaan dadka qaata aad, kaarka Christmas waa in ay ahaataa in ka yar 10 MB.
Share Online : Waxaad si toos ah u daabacaan kartaa kaararka Christmas kartoon online oo soo diro link aad qoyskaaga iyo saaxiibadaa si ay u daawan kartaa kaararka ee web browser.
Jabbuuti : badbaadi kaararka Christmas kartoon ah u iftiimiyo qaabab ee tayo sare leh, laakiin size file yar. Kaararka Jabbuuti oo lagu ciyaari karo iyada oo Internet Explorer iyo sidoo kale web kale daalacashada ama warbaahinta ciyaartoyda oo taageera qaab Jabbuuti.
EXE : Tani waa caadiga ah standalone qaab eedeysanuhu file. The qaata kaarka Christmas ma u baahan tahay si loo soo dajiyo wax u ciyaaro kaararka. Laakiin qaar ka mid ah bixiyeyaasha adeegyada email hana u oggolaan in aad u soo dirto files EXE. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan doontaa in aad cadaadin file ka hor diraya via email, iyo uncompress si ay u ciyaaro.
Screensaver : Marka qaata aad u hesho shahaado Christmas, ay si deg deg ah ku rakibi kartaa sida screensaver computer . Habkan, marka ay computer gala hab baado screen, ay u arki karaan Salaan Christmas.
Marka la soo dhaafay, soo dir Cards dhaceen ka hor Christmas
Hab aan ugu jeclaa in ay u diraan card Christmas waa via email. Waa sahlan oo qaata aad u isla markiiba ka heli kartaa. In Flash Gallery Factory, ayaa loo baahan yahay xoogaa tallaabooyin ah oo kaliya in ay u diraan kaararka Christmas dhaceen.
1. U samaynta kaarka Christmas dhaceen in Muqaal Mode.
2. Marka aad ku faraxsan tahay kaarka yihiin, u tag tab "Abuur".
3. Riix "Share Online" oo email dooro in sanduuqa pop up wada hadal ah.
4. Dooro sida HTML nooca wax soo saarka (HTML iyo files Jabbuuti oo labadaba la abuuri doonaa).
5. Riix "Abuur" oo nasta sugaan.
6. Muuqaalka Express furi doonaa, oo waxaad ku qor karaa qaataha (s) cinwaanka email ah.
7. beddel content ku xiran iyo email ah.
8. Guji "Send" badhanka si ay uga soo kaarka Christmas.
Talooyin: More Aad Sameyn Karto
Marka laga reebo kaararka Christmas, waxa kale oo aad soo bandhigto laga yaabaa oo dhan photos gaar ah laga bilaabo Janaayo ilaa December la music ee gallery qurux badan sawir kombiyuutarka. Haddii aad rabto in aad desktop baashaal ah, sidoo kale ilaa slideshow ah kartoon ah sida screensaver. Haddii aad leedahay website ah, geliyaan sawirkaaga gallery in ay sawiro la website aad visitors wadaagaan.
Hadda download Flash Gallery Factory iyo WOW saaxiibadaa diraya this kaararka Christmas gaar ah - dhaceen iyo shakhsi.
Divx Joiner: midowdo Dhowr Divx Files galay Mid ka mid ah
> Resource > Video > Sida loo sameeyo dhaceen Christmas Cards la Photos